Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 15:1-58
15 Iye zvino hama, ndava kukuyeuchidzai nezvemashoko akanaka andakakuzivisai,+ amakagamuchirawo, uye amakaramba muchitsigira. 2 Mashoko aya akanaka andakakuzivisai ari kukuponesai ndokunge maramba makaabatisisa, kunze kwekunge makava vatendi pasina. 3 Nekuti chimwe chezvinhu chandakatanga kupfuudza kwamuri, ndechiya chandakagamuchirawo, chekuti Kristu akafira zvivi zvedu maererano neMagwaro;+ 4 uye kuti akavigwa,+ akamutswa+ pazuva rechitatu+ maererano neMagwaro;+ 5 uye kuti akazviratidza kuna Kefasi,*+ akazozviratidza kune vane Gumi Nevaviri.+ 6 Akabva azozviratidza kuhama dzinopfuura 500 dzakaungana pamwe chete,+ uye vakawanda vavo vachiri vapenyu nanhasi, asi vamwe vavo vakarara murufu. 7 Akabva azozviratidza kuna Jakobho,+ akazozviratidza kuvaapostora vese.+ 8 Asi akazopedzisira nekuzviratidzawo kwandiri+ sekunge ari kuzviratidza kumunhu akaberekwa nguva isati yakwana. 9 Nekuti ini ndiri mudiki pavaapostora vese, uye handina kukodzera kunzi muapostora, nekuti ndaitambudza ungano yaMwari.+ 10 Asi nyasha dzaMwari dzakaita kuti ndive sezvandiri. Uye haana kundinzwira nyasha pasina, asi ndakashanda kupfuura vamwe vese; kwete kuti ndini, asi inyasha dzaMwari dziri kushanda mandiri. 11 Saka kungava kuti ndini kana kuti ndivo, aya ndiwo maparidziro atinoita, uye ndizvo zvakaita kuti muve vatendi. 12 Saka kana zviri kuparidzwa kuti Kristu akamutswa kuvakafa,+ sei vamwe venyu vachiti hapana kumuka kwevakafa? 13 Chokwadi, kana kusina kumuka kwevakafa, saka Kristu haanawo kumutswa. 14 Asi kana Kristu asina kumutswa, chokwadi kuparidza kwedu hakuna zvakunobatsira, uye kutenda kwenyu hakunawo zvakunobatsira. 15 Zvakare, isu tinganziwo tiri kupupurira Mwari nhema,+ nekuti takapupurira Mwari tichimurevera nhema kuti akamutsa Kristu+ iye asina kumumutsa kana chiri chokwadi kuti vakafa havazomutswi. 16 Nekuti kana vakafa vasingazomutswi, Kristu haanawo kumutswa. 17 Uyezve, kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakushandi; munoramba muri muzvivi zvenyu.+ 18 Uyewo vaya vakarara murufu pamwe naKristu vakaparara.+ 19 Kana takava netariro muna Kristu muupenyu huno chete, tinosiririsa kupfuura vanhu vese. 20 Asi zvino Kristu akatomutswa kuvakafa, sechibereko chekutanga pane vaya vakarara murufu.+ 21 Nekuti rufu rwakauya kuburikidza nemunhu,+ saka kumuka kwevakafa kunouyawo kuburikidza nemunhu.+ 22 Nekuti sezvo vese vari kufa muna Adhamu,+ vese vachaitwawo vapenyu muna Kristu.+ 23 Asi mumwe nemumwe panguva yake: Kristu chibereko chekutanga,+ kwozotevera vaya vari vaKristu, panguva yekuvapo kwake.+ 24 Kwozotevera mugumo, paanogamuchidza Umambo kuna Mwari wake uye Baba, paanenge aparadza hurumende dzese, nevanhu vese vane chiremera nemasimba.+ 25 Nekuti anofanira kutonga samambo kusvikira Mwari aisa vavengi vese pasi petsoka dzake.+ 26 Uye muvengi wekupedzisira, rufu, achaparadzwa.+ 27 Nekuti Mwari “akaisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake.”+ Asi pazvinonzi ‘zvinhu zvese zvakaiswa pasi,’+ zviri pachena kuti hazvisanganisiri wacho akaisa zvinhu zvese pasi pake.+ 28 Asi zvinhu zvese pazvinenge zvaiswa pasi pake, Mwanakomana pachake achabva azviisawo pasi peuya akaisa zvinhu zvese pasi pake,+ kuti Mwari ave zvinhu zvese kuvanhu vese.+ 29 Kana zvisina kudaro, vaya vari kubhabhatidzwa kuti vazofa vachaitei?+ Kana vakafa vasingazombomutswi, zvinobatsirei kuti munhu abhabhatidzwe kuti azofa? 30 Isuwo tinoisirei upenyu hwedu pangozi nguva dzese?+ 31 Mazuva ese ndinotarisana nerufu. Ichi ichokwadi hama dzangu kungofanana nekudada kwandinoita nemi muna Kristu Jesu Ishe wedu. 32 Kana ndakarwa nezvikara muEfeso+ sezvakaitwa nevamwe vanhu,* izvozvo zvinondibatsirei? Kana vakafa vasingazomutswi, “ngatidye, ngatinwe, nekuti mangwana tichafa.”+ 33 Musatsauswa. Ushamwari hwakaipa hunokanganisa* tsika dzakanaka.+ 34 Pengenukai muite zvakarurama uye musaita chivi, nekuti vamwe havazivi Mwari. Ndiri kuzvitaura kuti munyare. 35 Kunyange zvakadaro, mumwe achati: “Vakafa vachamutswa sei? Vachauya nemuviri wakaita sei?”+ 36 Iwe munhu asingafungi! Chaunodyara hachiitwi chipenyu kunze kwekunge chatanga chafa. 37 Uye kana chiri chaunodyara, haudyari muviri unozovapo kana chinhu chichinge chakura, asi unodyara tsanga chete, ingava yegorosi kana yeimwe mbeu; 38 asi Mwari anoipa muviri sezvaanenge ada, uye anopa mbeu imwe neimwe muviri wayo. 39 Nyama yese haina kufanana: kune yevanhu, kune yemombe, kwoitawo nyama yeshiri, neyehove. 40 Uye kune miviri yekudenga+ nemiviri yepanyika;+ asi kubwinya kwemiviri yekudenga ndekumwe, uye kwemiviri yepanyika ndekumwewo. 41 Kubwinya kwezuva ndekumwe, kubwinya kwemwedzi ndekumwewo,+ uye kubwinya kwenyeredzi ndekumwe; nyeredzi imwe neimwe inosiyana neimwe pakubwinya. 42 Ndizvo zvakaitawo kumutswa kwevakafa. Muviri unodyarwa mukuora; unomutswa mukusaora.+ 43 Unodyarwa mukuzvidzwa; unomutsirwa mukubwinya.+ Unodyarwa usina simba; unomutswa wava nesimba.+ 44 Unodyarwa uri muviri wenyama; unomutswa uri muviri wemweya. Kana kuine muviri wenyama, wemweya urikowo. 45 Saka zvakanyorwa kuti: “Munhu wekutanga Adhamu akava munhu* mupenyu.”+ Adhamu wekupedzisira akava mweya unopa upenyu.+ 46 Asi muviri wemweya hausi iwo unotanga. Muviri wenyama ndiwo unotanga kwozotevera wemweya. 47 Munhu wekutanga akabva panyika uye akaitwa neguruva;+ munhu wechipiri akabva kudenga.+ 48 Zvakaita munhu akaitwa neguruva, ndizvo zvakaitawo vaya vakaitwa neguruva; uye zvakaita munhu wekudenga, ndizvo zvakaitawo vaya vekudenga.+ 49 Uye sezvo takava nemufananidzo weuya akaitwa neguruva,+ tichavawo nemufananidzo weuya wekudenga.+ 50 Asi hama ndinokuudzai izvi, kuti nyama neropa hazvingagari nhaka yeUmambo hwaMwari, uye kuora hakugari nhaka yekusaora. 51 Inzwai! Ndinokuudzai chakavanzika chitsvene* chekuti: Tese hatizorari murufu, asi tese tichashandurwa,+ 52 munguva dikidiki, mukubwaira kweziso, mukurira kwebhosvo rekupedzisira. Nekuti bhosvo richarira,+ uye vakafa vachamutswa vasingachaori, uye isu tichashandurwa. 53 Nekuti ichi chinoora chinofanira kupfeka kusaora,+ uye ichi chinofa chinofanira kupfeka kusafa.+ 54 Asi ichi chinoora pachinopfeka kusaora uye ichi chinofa pachinopfeka kusafa, shoko rakanyorwa richabva raitika rinoti: “Rufu rwaparadzwa zvachose.”+ 55 “Rufu, kukunda kwako kuri kupi? Rufu, kuruma kwako kuri kupi?”+ 56 Kuruma kunobereka rufu chivi,+ uye simba rechivi Mutemo.*+ 57 Asi tinotenda Mwari, nekuti anoita kuti tikunde naShe wedu Jesu Kristu!+ 58 Saka hama dzangu dzinodiwa, ivai vakasimba,+ vasingazununguki, muchigara muine zvizhinji zvekuita+ mubasa raShe, muchiziva kuti basa renyu harisi pasina+ munaShe.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “semaonero anoita vanhu.”
^ Kana kuti “hunoodza.”
^ Kana kuti “Mutemo ndiwo unopa chivi simba rawo.”